Mahajanga: Polisy naratra voatsindrona antsy teo amin’ny kibony
lundi, 13 août 2018 14:17
Nisy rangahy iray nanindrona antsy ary saika namono nahafaty polisy iray nanao ny asany ny alakamisy 09 aogsitra 2018 teo. Tao an-tokontanin'ny polisy teny amin'ny Boriboritany Fahatelo – Mahajanga mihitsy no nanaovany ny habibiany tamin'ity polisy ity.
Nahazo antso avy amina olon-tsotra ny mpitandro ny filaminana fa misy mpanao vola sandoka eny amin'ny manodidina an'i Tsararano. Nidina avy hatrany teny an-toerana ny polisy ary mbola tratra teny tokoa ny roalahy niaraka tamin'ny fitaovana nanaovana vola sandoka.
Nosamborina ireo olon-dratsy ary nentina teny amin'ny biraon'ny polisy teny Antanimasaja. Vao tafidina ny Bajaj nitondrana azy anefa, tafiditra tao anaty tokontanin’ny polisin'ny Boriborintany Fahatelo dia notsindronin'ilay olon-dratsy ny iray tamin'ireo polisy nitondra azy ary nilefa izy ireo saingy ny iray ihany no tafaporitsaka fa ilay nanindrona antsy voasambotra.
Efa tsy misy hatahorana ny ain'ilay polisy voatsindrona antsy saingy mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitalibe PEZAGA Androva hatramin'ny androany. Hatolotra ny Fampanoavana avy hatrany kosa ity olon-dratsy ity.